Celtra AdCreator: Bandhig Dijital ah iyo Xayeysiinta Fiidiyowga CMP | Martech Zone
AdCreator waxaa lagu dhisay in kabadan 50 jiido iyo hoos udhac horumarsan iyo in kabadan 200 horay loo tijaabiyay, astaamaha lakala soocikaro abuurka xayeysiinta Mawduucyada la dhisay waxay dardargeliyaan naqshadeynta, horumarka, waxayna hubiyaan joogtayn, ay ka mid yihiin Tilmaame-baraha Bakhaarka, Inline Video Player, Galleries, Wadaagista Bulshada iyo inbadan.
Dhammaan qaybaha iyo astaamaha AdCreator waxaa lagu tijaabiyaa aaladaha, nidaamyada hawlgalka, iyo bay'adaha. AdCreator sidoo kale wuxuu leeyahay kontaroolo hubin tayo leh oo si otomaatig ah loo dhisay, marka waad ogtahay waxa aad aragto inay yihiin sida saxda ah adeegsadaha uu arki doono.
Naqshadeynta jawaabta waxay awood kuu siineysaa inaad dhisto hal xayeysiis hal abuur leh oo la jaan qaada tirada shaashadaha badan. Awooda animation AdCreator waxaa ka mid ah animation shay caadiga ah, nooc animation iyo animation oo qayb ka ah waqtiga jadwalka. Animations adag, sidoo kale waxaad isticmaali kartaa noocyo tallaabo caadadii ama isku qasan in yar oo JS ah.
Astaamaha AdCreator waxaa ka mid ah:
Hal abuurnimo firfircoon - Soojiidasho, hal abuur firfircoon oo shaqsiyan heer sare ka muuqda kana turjumaya macnaha guud ee isticmaalaha waqtiga dhabta ah ayaan culeys saa'id ah lahayn. Si dhakhso leh u dhis oo u arag hal abuurnimo firfircoon - wax kasta oo firfircoon ka samee fiidyowyada iyo sooyaallada qoraalka iyo URL-yada.
Toos-u ciyaar ciyaar khadka tooska ah ee fiidiyoowga - Dhig khadadka tooska ah, ciyaar ciyaar, fiidiyow tayo sare leh meel kasta. Xayiraad dheeri ah ma lahan, is beddellada 'GIF' ee firfircoonina ma leh. AdCreator wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto xayeysiis fiidiyow ah oo is dhexgal leh oo leh fiidiyoow otomaatig ah oo toos ah qalabka, xawaaraha, iyo tayada.
Koodh La'aan (Ilaa Aad Doonto mooyee) - Haddii aad doorbideyso inaad lambar sameyso, waxay soo bandhigeen dhammaan qaybaha iyada oo loo marayo hal-abuurkooda API, oo awood kuu siinaya inaad ku darto JS-ga gaarka ah ama aad dejiso qaabab aad u wacdo, tixraacdo oo aad xakameyso bogagga, dhacdooyinka iyo isdhexgalka.
Waxay ku socotaa Adeeg kasta oo Xayeysiis ah - Hal-abuurayaasha lagu dhisay barnaamijka maareynta hal-abuurka ee Celtra ayaa la hubiyey oo la caddeeyey inay ku dhex socdaan aalado kala duwan, deegaanno, barnaamijyo, boggag iyo xayeysiisyo xayeysiis ah; tani waxay xaqiijineysaa in bixinta iyo ka warbixinta labadaba ay u shaqeeyaan sidii la rabay. Hal-abuurayaasha waxay u socdaan si aan kala go 'lahayn oo ay la socdaan in ka badan labaatan iyo 1 & 3 qaybood oo xayeysiis ah.
Falanqeynta Fudud - Horudhac ku samee hal-abuurkaaga dhammaan qalabka, noocyada firfircoon, iyo cabbirka shaashadda. Hal guji, u dir macaamiisha URL-ku-eegis AdCreator ah si ay ugu arki karaan hal-abuurka miiskooda ama qalabka moobiilka sidoo kale.
Tababar Bilaash ah - Laga soo bilaabo maktabad ballaadhan oo ah maqaallo taageero ah oo bilaash ah tababarka dusha sare, websaydhyada toddobaadlaha ah iyo taageerada iimaylka khibradda leh, ujeedkoodu waa inay hubiyaan inaad wax badan ka hesho barnaamijka maareynta hal-abuurka ee Celtra.
Tags: naqshadeynta xayeysiiskaciyaaryahanka xayeysiiskaAdCreatorCeltraCeltra AdCreatorbalbalooyinkiiXayeysiiska GalleryKhadka Tooska ah ee Video PlayerKhadka Tooska ah ee Video Playernaqshadeynta xayeysiiskawadaagista bulshadaXayeysiiska Wadaagga Bulshadakeydka dukaankaXayeysiiska Tusaha Goobtanaqshadeynta xayeysiiskaxayeysiis video ahfiidiyow muuqaal ah